Waraaqaha Acrylic-ka Shiinaha ee Midabaysan & Midabbada Plexiglass midab leh iyo alaab-qeybiyeyaasha | Donghua
Acrylic waxaa lagu heli karaa in ka badan oo kaliya cad! Xaashida midabaysan ee midabaysan waxay u oggolaaneysaa iftiinka inuu ku dhex maro midab leh laakiin aan faafin. Shayga si cad ayaa looga arki karaa dhinaca kale sida daaqad madoow. Ku fiican mashaariic badan oo hal abuur leh. Sida dhammaan acrylics, xaashidan si fudud ayaa loo goyn karaa, loo samayn karaa loona samayn karaa. Dhua waxay soo bandhigtaa xaashiyo aad u tiro badan oo midabbo leh Plexiglass Acrylic Waraaqaha.
• Waxaa lagu heli karaa casaan, oranjo, jaalle, cagaar, bunni, buluug, buluug madow, guduud, madow, caddaan iyo midabbo kala duwan
Colored looxa Sheets & Plexiglass Midab leh, Waraaqaha Caaga looxa
Xaashida midabaysan ee loo yaqaan 'plexiglass' midabkeedu waa miisaan khafiif ah, adkeysi leh, u adkaysta saamaynta, waxayna ku siisaa sifooyin qurux badan. Kuwanigo'yaal looxa way fududahay in la been abuuro, waa la dhejin karaa, waa la jari karaa laser, waa la qali karaa, la xardhi karaa, la safeyn karaa, waa la kululayn karaa oo xaglo kala duwan ayaa laaban karaa, waxay noo suurtagelinayaan in aan ku been abuurno cabir kasta iyo midab kasta oo aan u galno badeecooyin rafcaan leh.
Dhua waxay soo bandhigtaa xaashiyo aad u tiro badan oo midabbo leh Plexiglass Acrylic Waraaqaha. Midabada midabka caadiga ah waxaa ka mid ah casaan, oranjo, jaalle, cagaar, bunni, buluug, buluug mugdi, guduud, madow, caddaan iyo midabbo kala duwan. Dhammaantood waa la goyn karaa-ilaa-weyna ku habboon yihiin goynta laser, taas oo ka dhigaysa been abuur ah calaamadaha, bandhigyada barta-iibsiga, iyo naqshadaha nalalka fudud oo hufan.
Magaca Badeecada Xaashida looxa midabaysan - "PMMA, Lucite, Acrylite, Perspex, Acrylic, Plexiglas, Optix"
Tdillaacid 0.8 0.8 - 10 mm (0.031 gudaha - 0.393 gudaha)
Midab Casaan, oranjo, jaalle, cagaar, bunni, buluug, buluug madow, guduud, madow, ECT cad. Midab khaas ah ayaa la heli karaa
Teknolojiyada Geedi socodka wax soo saarka xad dhaafka ah
MOQ 300 go'yaal
Gaarsiinta Waqti 10-15 maalmood ka dib xaqiijinta amarka
DHUA Hsida Colored Amacaan Sheets Ala heli karo gudaha Custom Sizes iyo Hues
DHUA waxyaabaha midabkeedu yahay xaashida acrylic-ka ee caadada ah waa wax si gaar ah loo sameeyey, oo ah qalabka xaashi caag ah oo lagu qurxiyo waxaana lagu heli karaa midabbo fara badan.
Waxaan ku siineynaa go'yaal midab leh oo loo yaqaan 'plexiglass acrylic acrylic' oo ku jira noocyo kala duwan oo hufan, tarjumaad iyo midabbo aan muuqaneyn.
Xaashida loo yaqaan 'acrylic multi and all-purpose acrylic' oo leh waxyaabo shaqooyin badan leh, xaashida looxa loo yaqaan 'acrylic sheet' waxay leedahay codsiyo kaladuwan oo badan oo ku saabsan degsiimooyin badan, ganacsi, warshado, iyo adeegsiyo xirfadeed.
Calaamadaha, looxyada bandhigga
Farshaxanka beerta & qurxinta guriga
Qaybaha asturnaanta qaybta
Daboolida nalka fudud
Khaanadaha gadaal loo riixo, khaanadaha qurxinta
go'yaal midab akril ah
qiimaha xaashida looxa
xaashi acrylic madow
midab xaashida loo yaqaan 'acrylic plexiglass'
warqad akrilik midab leh